Wasiirka Caafimaadka Oo Ku Dhawaaqay Qorshe Maalin Aan Loo Kala Hadhayn Olole Nadaafadeed Oo Heer Qaran Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa (ANN) Wasiirka Caafimaadka ee Somaliland Dr. Xuseen Maxamuud (Xuseen Xoog), ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu dhowaan ku talo jiro sidii uu ugu dhawaaqi lahaa maalin qaran oo olole nadaafadeed ah, taas oo dalka oo dhan laga samayn doono qashin ururin.
Wasiirku waxa uu hadalkaa ka sheegay mar ay saaka kala qaybgalayeen shaqaalaha Wasaaradda Caafimaadka olole nafaadeed Wasaaradda gudaheeda ah isaga iyo Wasiirku Xigeenka Caafimaadka Marwo Nimco Xuseen Qowdhan.
Dr. Xoog waxa uu xusay in maalin kasta oo khamiis ah laga samayn doono gudaha Wasaaradda Caafimaadka ee magaalada Hargeysa olole nadaafadeed oo ay ka wada qaybgali doonaan masuuliyiinta iyo dhammaan shaqaalaha Wasaaraddu. Sidoo kale waxa uu xusay in haddii la waayo nadaafad aanu caafimaad jirayn.
Dr. Xuseen Maxamuud (Xuseen Xoog), waxaa kale oo uu tilmaamay in sidoo kale Ololahaa nadaafadeed laga samayn doono goobaha cisbitaalada maalinta khamiista.
Wasiirku waxa uu ku dhawaaqay inuu ku talo jiro inuu sameeyo dhawaan maalin heerqaran ah oo dhammaan shacab iyo madaxba laga wada qaybgali doono olole nadaafadeed oo laga sameyn doono lixda Gobol iyo Degmooyinka ay jamhuuriyada Somaliland ka kooban tahay.